Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Haatran'ny taolana: Fitaovana fandrefesana ny tany vaovao
“Matetika ny olona no taitra rehefa mahafantatra fa ny hamafin'ny taolana dia ampahany iray monja amin'ny fananana taolana matanjaka matanjaka. Raha ny marina, ny ankamaroan'ny marary izay tapaka noho ny taolana marefo dia tsy manana hakitroky ny taolana osteoporotic, "hoy ny Dr. Paul Hansma, Profesora momba ny Fizika ao amin'ny UC Santa Barbara izay namorona ny teknolojia ao ambadiky ny Bone Score™.
Ny Active Life Scientific, Inc. (ALSI) dia nanambara androany fa nahazo fahazoan-dàlana avy amin'ny US Food and Drug Administration De Novo ho an'ny fitaovana fandrefesana taolana. Ny fanombanana Bone Score ™ dia maka fomba fiasa vaovao amin'ny fandrefesana taolana ary mampiasa teknolojia vaovao hitsapana ara-batana ny taolana. Azo ampiasaina izy io, miaraka amin'ny fitsapana diagnostika hafa, mba hanampiana ny mpitsabo hanangona fahatakarana feno kokoa momba ny fahasalaman'ny taolana. Ny fahazoan-dàlana amerikana vao haingana dia nanaraka ny CE Mark tany Eoropa (nahazo tamin'ny 2017) ary manamarika dingana lehibe amin'ny fanitarana fitaovana azon'ny dokotera mitantana ny fahasalaman'ny taolana.
"Misy fahasamihafana eo amin'ny habetsahan'ny taolanao, na ny hakitroky, ary ny hatsaran'ny taolanao, na ny kalitao. Indrisy anefa fa mijanona ho 'boaty mainty' ny fanombanana klinika momba ny kalitao. Ny fitsapana Bone Score ™ dia mamaritra ny fomba hanoheran'ny taolana ny fanamby ara-batana, amin'ny ambaratonga azo antoka sy mikroskopika, ary manome angon-drakitra tsy azo teo aloha ho an'ny dokotera hodinihina rehefa manadihady ny kalitaon'ny taolan'ny marary iray,' hoy ny Dr. Hansma nanampy.
Ny fanombanana azo antoka sy tsy misy taratra ao amin'ny birao, Bone Score ™, dia miavaka amin'ny fomba radiolojika na sary hafa (X-ray, DEXA ary CT) izay mandrefy ny hakitroky sy ny rafitra mineraly taolana. Izany dia fomba ara-batana, mampiasa fitaovana vaovao (ny OsteoProbe®), izay isaina ho Bone Material Strength index (BMSi) na Bone Score ™, ary manome ny dokotera ny vaovao tsy hita teo aloha izay azon'izy ireo dinihina, miaraka amin'ny antony hafa, rehefa fanombanana ny fahasalaman'ny taolana.